We are undone by each other. And if we are not, we are missing something.
. . .Butler. . .
ခါးကြားကနေ ဓါးမြှောင်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့လူကို ကြောင်က အသက်မရှူဘဲကြည့်နေတယ်။ လူဟာ သူ့အထဲကနေ ထွက်သွားတဲ့ အလောင်းကောင်ရဲ့ ကျောကို ဓါးမြှောင်နဲ့ထိုးစိုက်လိုက်တယ်။ နောက် တစ်ချက်ထိုးဖို့ ဓါးမြှောင်ကို ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး နောက်တစ်ချက် ထပ်စိုက်လိုက်တယ်။ ဓါးမြှောင်နဲ့ စိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အလောင်းကောင်ဟာ ကြောင်ရှေ့မှာ မှောက်လျက်လဲကျသွားတယ်။ အသွေးအသားခန္ဓာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အလောင်းကောင်ထဲကနေ အရည်တွေ စီးကျလာတယ်။ စီးကျသွားတဲ့အရည်တွေကို ကြောင်ကအနံ့ခံနေတယ်။
လူဟာသူ့ဓါးမြှောင်မှာပေနေတဲ့ အရည်တွေကို ဘောငိးဘီနဲ့သုံးလေးခါသုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ ဓါးမြှောင်ကို အိတ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်နေတယ်။
ကြောင်ရှေ့ကအလောင်းကောင်ဟာ မသေမရှင်နဲ့တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်။ လက်ဖျားတွေ လှုပ်နေသလို ခြေဖျားတွေ လည်းတလှုပ်လှုပ်နဲ့။ ကျောကုန်းထဲကထွက်လာတဲ့အရည်တွေကတော့ ရပ်မသွားဘူး။ ကြောင်ကလည်း အရည်တွေကို တရှုတ်ရှုတ်နဲ့အနံ့ခံနေတယ်။
'' သတ်ဖြတ်ခြင်းဟာ ရုပ်သဘောရှုထေညင့်ကကြည့်ထားတဲ့အမြင်ပဲ။ အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုတော့ ရုပ်သဘောကနေခွာပြီး ကြည့်နိင်မှသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ '' ဆိုပြီး ကြောင်ကိုမကြည့်ဘဲ လူက ခပ်ဖြည်းဖြည်းပြောလိုက်တယ်။
'' ချစ်တဲ့သူကိုသတ်ဖြတ်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေဟာ ရုပ်သဘောဖြစ်စဉ်ထဲက သမားရိုးကျဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲ။ ချစ်တဲ့လူ တွေကိုအကြမ်းဖက်တာကတော့ စိတ်သဘောဖြစ်စဉ်နဲ့အဓိကအလုပ်လုပ်ရင်း ရုပ်ပေါ်မှာရင်းနီးမြှုပ်နံတဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့သူကိုမသတ်ဘဲ အကြမ်းဖက်တယ် ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား ပေါ်လာတာမဟုတ်လား။ '' လို့လူကကြောင်ကို ငုံ့ကြည့်ရင်းဆက်ပြောနေတယ်။ အရည်တွေကို တရှုတ်ရှုတ်နဲ့နမ်းကြည့်နေရာကနေ ကြောင်ကလူကို မော့ကြည့် လိုက်တယ်။ အမြီးကိုတော့ အပေါ်ကိုထောင်ထားတယ်။
'' ချစ်ခြင်းနဲ့သတ်ဖြတ်မှု ချစ်ခြင်းနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကြားမှာ ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ထားတဲ့ယန္တရားရှိတယ်။ အဲဒီယန္တရား ကတော့ကိုယ်ကျင့်ယန္တရားပဲဖြစ်တယ်။ ဒီယန္တရားဟာစောစောက ယန္တရားနစ်ခုကို မနိုင်မနင်းဆွဲယူချိတ်ဆက် ထိန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ သူထိန်းနေတဲ့ ယန္တရားနစ်ခုကိုတော့ ဘယ်တော့ မှထိန်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို သူ မသိဘူး။ ဒါဟာအသိပညာနုံနဲ့မှုပဲဖြစ်တယ်။' '' လို့ လူက ဓါးမြှောင်ပေါ်ကိုညာလက်တင်ရင်း ထပ်ပြောနေတယ်။
'' ကိုယ်ကျင့်ယန္တရားမရှိလို့မရဘူးဆိုပြီးမြင်ခဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အရိုးအဆွေးအမြေ့တွေကို မင်းမြင်တယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်ပဲ ကိုယ်ကျင့်ယန္တရားမရှိလို့မရဘူးလို့ မင်းမပြောတာမဟုတ်လား။ တစ်ခါတစ်ခါမှာ သမိုင်းဟာ သူ့ရဲ့အနှစ်သာရကို ထောင်လိုက်ဒိုင်မင်းရှင်းနဲ့မြှုပ်ထားတာကို လူတွေ ကမသိကြဘူး။ သမိုသ်းရဲ့အလျားလိုက်သဘော ထဲမှာပဲ လူကသူတို့ရဲ့အနှစ်သာရကို ပြန်ရှာ ဖွေနေကြတယ်။ ဒီဒိုင်မင်းရှင်းနစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တစ်လမ်းစီ သွားနေ တယ်လို့ ထင်ရလောက် အောင် လူဟာသိပ်ကိုနုံအခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သပ်သပ်စီ စီးဆငင်းနေတဲ့ မြစ်နစ်ခုဟာ ထောင်လိုက်သဘောမှာ မြစ်တစ်စင်းတည်းဆိုတာကို လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေသာမြေအောက်ထဲ ရောက် သွားတယ် သဘောမပေါက်လိုက်ကြဘူး။ '' ဆိုပြီး သူ့ရှေ့ကတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ အလောင်း ကောင်ကိုကြည့်ရင်း ပြောလိုက် တယ်။
ကြောင်ရှေ့မှာတဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ အလောင်းကောင်ဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားသွားရင်း သူ့ရှေ့က ချောက်ကမ်းပါး ထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။
'' သြော် အလောင်းကောင်တွေဟာ ချောက်ကမ်းပါးထဲကိုပြုတ်ကျကုန်တာပါလား။ ''
အလောင်းကောင်တွေဟာ လူထဲကိုခုန်ဝင်ခဲ့တယ်။ လူထဲကနေ ခုန်ထွက်ခဲ့တယ်။ ချောက်ကမ်းပါးထဲကို ပြုတ်ကျ သွားတယ်။
'' အသက်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်မဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုအရာမှာမဆိုအသက်ဟာ ဒိုင်မင်းရှင်းသုံးခုထဲမှာ အစက်တစ်စက်ဖြစ်လိုက် လိုင်းတစ်လိုင်းဖြစ်လိုက် ထုလုံးတစ်ခုဖြစ်လိုက်နဲ့ သရုပ် ဖော်နေတယ်။ အသက် ဒါမှမဟုတ် အသက်မဲ့ခြင်းဟာ သူသရုပ်ဖော်နေတဲ့ သရုပ်ပြသဘော ထက်ပိုပြီး ကြီးမြတ်မနေဘူးဆိုတာကိုတွေ့လာရတယ်။ သတ္တဝါရဲ့ အသက်ဟာ အသက်မဟုတ်တော့ ဘဲ သတ္တဝါရဲ့အသက်ဟာ သရုပ်ပြသဘောအဖြစ်နဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ''
ကြောင်ဟာချောက်ကမ်းပါးအစွန်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွားသွားလိုက်ပြီးမှအလောင်းကောင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့ချောက်ကြီး ထဲကို ငုံ့ကြည့်နေတယ်။
ငုံကြည့်နေတဲ့ကြောင်ကို လူကပွေ့ချီလိုက်ပြီး နောက်လှည့်ထွက်လာတယ်။ ကပ်ထားတဲ့လှေနားကို တဖြည်းဖြည်း လျှောက်လာတဲ့ လမိးမှာ ကြောင်ဟာအမြီးကိုခပ်ဖွဖွလှုပ်ရင်း လူကိုေ့ကြည့်ပြီးလိုက် လာတယ်။
လှေကိုကြိုးဖြုတ်ပြီး လှေပေါ်တက် လှော်တက်နဲ့လှော်ပြီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။